Zviitiko zveSpanish mhosva yekunyepedzera yaunoda kushanyira. | Zvazvino Zvinyorwa
Zviitiko zveSpanish mhosva yekunyepedzera yaunoda kushanyira.
Ana Lena Rivera Munoz | | Nhoroondo yezvinyorwa
Vigo: Kumisikidza enganonyorwa naDomingo Villar, nyeredzi Inspector Leo Caldas uye Mutevedzeri Inspector Estévez.
Matsotsi ematsotsi ane marongero emunharaunda anokunda mumusika weSpain. Kufamba mumigwagwa yemataundi nemaguta kunowedzera kuwedzera kune kuferefetwa kwekuponda kwevanhu veko nevashanyi. Haisi nzvimbo dzese dzinozivikanwa, zvirinani kuti hadzisi kusvika iyo saga iri mubvunzo isingakunde mumusika. Semuenzaniso wakajeka, mukurumbira wakawanikwa naBaztán mushure mehutatu hwaDolores Redondo, mushure mekuhwina mubairo wePlaneta. Dunhu reNavarre risingazivikanwe neruzhinji rweSpanish kushanya, iro nhasi rinoona migwagwa nemasango akazara nemabhiriji uye zororo.
Izvi hazvisi izvo chete zvinoitika neruzivo rwekunyengera, zvakare nenhoroondo yenhoroondo kana nhepfenyuro yeterevhizheni, asi ruzivo rwakadzama rwunodiwa nekuferefetwa kwematsotsi izano rakakwana rekuburitsa ruzivo rwekuvaka pasina kunetesa muverengi netsananguro. Iyi ingori mimwe mienzaniso.
2 Castellón: Julio Cesar Cano
5 Gijon: Jose María Guelbenzu
NeTrilogy yake yeWhite City, akaisa Vitoria panzvimbo yenyika yevashanyi. Famba mumigwagwa ine cobbled yeguta rekare, kereke huru uye zvimwe zvinokosheswa nerubatsiro rweyekutsvagisa, Kraken, muongorori ane tsika yekufungidzira uye mhosva. Zvikamu zvakawanda munhoroondo yeVitoria zvinomisikidza iyo trilogy, ichipa vaverengi angangoita gwara revatariri.
Castellón: Julio Cesar Cano
Kubva paruoko rwemuongorori Monfort, muverengi anoenda kuburikidza nezvinonyanya kushanya zveCastellón, kubva pamusika kuenda kuimba yekutandarira, zvitunha zvakapararira zvakakomberedza guta rino, kunze kwenzvimbo dzekufarira kwevashanyi, izvo zvinopa kumahombekombe eprovince. Vazhinji vanopfuura vashanyi vemahombekombe vava kuswedera kuguta kuzoona zviitiko zvematambudziko akaferefetwa naMonfort.
Barcelona ndiyo yakasarudzika mamiriro enhoroondo yeSpanish, iyo nhema uye imwe. Kubva kuna Alicia Giménez Barlett naPetra Delicado kuenda kuCarvalho de Montalbán, vachipfuura nemuToni Hill pamwe nemuongorori wake Salgado, vazhinji ndevaya vanosarudza Barcelona senzvimbo yavo uye vese vanokosha. Nemaonero akasiyana, Carlos Zanón anoratidzira akaipisisa uye nerima Barcelona mumanovels ake, achisarudza epakati uye kure marongero, ese akaenzana kusuwa.
Gijon: Chiitiko chemapurisa akateedzana naJM Guelbenzu achitarisa mutongi anoongorora Mariana de Marco.
El Baztán, dunhu reNavarran rine vagari vasingasvike zviuru zvisere vasingasviki makiromita makumi matanhatu kubva kuPamplona. Iyo yakasarudzika paradhiso yakave inozivikanwa neruoko rwemuongorori Amaia Salazar, uko mushanyi anotarisira kuti ichanaya zvakanyanya mazuva mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu pagore, sezvazvinoitika mutirilogy, kunyangwe chokwadi chiri chekuti haina kunaya kunyange hafu yegore. Nzira dzekunyora, vekumaruwa uye gastronomic vashanyi, nhasi mafashama munzvimbo kusvika makore apfuura asingazivikanwe nevazhinji.
Gijon: Jose María Guelbenzu
Iwo mapfumbamwe enganonyorwa muMariana de Marco akateedzana, murume mudiki anoongorora magistrate anoda kunwa, teerera kumimhanzi yechinyakare uye unomhanya pamvura yegungwa kana kupenya. Pakati, nzvimbo dzekugara uye mamwe mabhawa echechi ndiyo mamiriro akakwana ezvirongwa zvepedyo izvo Guelbenzu anovandudza mumanovels ake, mazhinji acho ari muGijon.
Pakati peVigo, mataundi akapoteredza, chikepe, gungwa, chikoro chekutengeserana, mabara anga atovhara, ese anotora hupenyu hwakasiyana kubva muruoko rwemupepeti Leo Caldas naEstévez wake asingaparadzanisike. Tsananguro refu kwete zvakajairika zveyakajairika nhoroondo yekunyengera uye grey uye anotya protagonist anopa zororo uye inonakidza mamiriro kune iyo nyaya.
Iyi ingori mienzaniso mishoma, mune chero mamiriro ezvinhu, zvakakosha kuona nzvimbo mumawoko evaongorori, matikitivha, vatongi nevamwe vapikisi venhoroondo yekuparwa kwemhosva kuSpanish. Iko kushanya kune zvinoitika zvemanovel aya zvinotora pane nyowani nyowani yekuverenga mushanyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Zviitiko zveSpanish mhosva yekunyepedzera yaunoda kushanyira.